EYONQULO 11 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYONQULO 11EYONQULO 11
Inyama enokutyiwa nemayingatyiwa
111*UNdikhoyo wanika uMosis noAron le miyalelo, 2-3ukuba bayigqithisele kumaSirayeli: “Kuzo zonke izilwanyana ezihamba emhlabeni zingátyiwa ezineempuphu ezicandekileyo kananjalo zisetyisa. 4-6Kodwa zona iinkamela, neembila, nemivundla, mazingatyiwa. Ewe kambe ziyetyisa, kodwa iimpuphu zazo azicandekanga. 7Inyama yehagu mayingatyiwa. Kaloku ihagu ineempuphu ezicandekileyo, kodwa ayetyisi. 8Inyama yezinto ezinjalo maningayityi, ningazichukumisi naxa zifileyo, kuba *zinomlaza.”
9Kwezasemanzini ningazitya zonke iintlanzi ezinamaphiko okugwedla namaxolo. 10Kodwa ke nantoni na engenamaphiko namaxolo ehlala emanzini ze ningayityi. 11Ezinjalo azityiwa; musani ukuzichukumisa naxa zifile. 12Nayiphi na into esemanzini engenamaphiko namaxolo inezothe.
13-19Mazingatyiwa ezi ntlobo zeentaka: oomakhozi, oozikhova, oontloyiya, oozilwangangubo, oozintsikizi, oomaxhalanga, oonomyayi, oozinciniba, ookhwalimanzi, oozingwamza, oozintambanane, oozingcwangube, oomangaba-ngaba, oobhobhoyi, oomalulwane.
20Zonke izinambuzane ezizitho zine eziphaphayo azityiwa, 21ngaphandle kwezo zitaka-takayo. 22Ezinjengeenkumbi, nootseki-tselu, nomqhathu, ziyatyiwa zona. 23Kodwa zonke ezinye izinambuzane eziphaphayo, ezirhoqozayo, azityiwa.
24-28Umntu ochukumise ezi zinto xa zifile woba nomlaza kude kutshone ilanga: iinyamakazi ezineempuphu, ngaphandle kwezo zineempuphu ezicandekileyo, zetyisayo nokwetyisa, kunye nezo zizitho zine zinamathupha. Umntu othe waphatha ezi zinto xa zifile, makahlambe impahla, kodwa woba nomlaza kude kube kutshone ilanga.
29-30Kwezirhubuluzayo nazi ezingatyiwayo: iintuku, amabuzi, iimpuku, oomacikilishe, ooxam, noomalovane. 31Umntu othe waziphatha nokuba zifile, woba nomlaza kude kutshone ilanga. 32Xa kukho into ethe yawelwa zezo zinto xa zifile, yoba nomlaza nayo. Ndithetha nkqu nezinto ezenziwe ngamaplanga, ngamalaphu, ngethwathwa, okanye ngerhonya, nokuba isetyenziselwa ntoni na loo nto; kufuneka ifakwe emanzini, kodwa liya kude litshone ilanga ingekahlambuluki. 33Ukuba into efileyo kwezi iwela engqayini, yonke into engaphakathi kuloo ngqayi ayinakutyiwa. Yona ingqayi kufuneka iqhekezwe. 34Ukutya okugalelwe amanzi akule ngqayi makungatyiwa – kumdaka. Naloo nto iselwayo ibikuloo ngqayi nayo isuka isuleleke. 35Nantoni na ekuwele kuyo into efileyo kwezi zibaliweyo iba nomlaza; isitovu sodaka, nokuba yimbiza, maziqhekezwe. 36Kambe wona umthombo nequla azisuleleki xa ziwelwe zezi zinto. Ke yena umntu ozichukumisayo uba nomlaza. 37Imbewu eza kulinywa ayisuleleki, nokuba idibene nento efileyo kwezi zixeliweyo. 38Kodwa xa loo mbewu ifakwe emanzini iyasuleleka kukudibana nento efileyo.
39Xa kufe isilwanyana esityiwayo, umntu osichukumisileyo uba nomlaza kude kutshone ilanga. 40Nomntu otye inyama yaso, nokuba uyihlambile impahla yakhe, uba nomlaza kude kutshone ilanga. Umntu othe wasithwala sifile isilwanyana kufuneka ayihlambe impahla yakhe, kodwa uba nomlaza kude kutshone ilanga
41-42Zonke izinambuzane ezirhubuluzayo, nezirhoqozayo, nezinemilenze emine nangaphezulu, zinezothe; mazingatyiwa. 43Ze ningazifaki umlaza ngokutya ezo zinto. 44Mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu. Yibani ngcwele, kuba mna ndingcwele.Nqulo 19:2; 1 Pet 1:16 Musani ukuzifaka umlaza nangasiphi na isidalwa esirhubuluzayo emhlabeni. 45NdinguNdikhoyo owanikhupha eJiputa ukuze ndibe nguThixo wenu. Yibani ngcwele, kuba mna ndingcwele.
46Nango ke umyalelo ophathelele kwizilwanyana, neentaka, nento yonke ehlala emanzini, nezinambuzane. 47Kufuneka nicalule phakathi kwento ehlambulukileyo nenomlaza, nezinto ezityiwayo nezingàtyiwayo.